निधनपछि कसले चलाउला तपाईंको फेसबुक ?:: Naya Nepal
काठमाडौं । तपाईंको फ्रेण्ड लिस्टमा भएका केही व्यक्तिको निधन भइसकेको हुनसक्छ । तर तपाईंले कल्पना गर्नुभएको छ, तपाईंको निधनपश्चात फेसबुक प्रोफाइल के होला ? कसले चलाउला ?
फेसबुकले यस्तो समयका लागि एउटा अप्सन दिन्छ । ता कि तपाईंको निधन भइसकेपछि अरु कसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् ।
तपाईंको फेसबुकमा रहेको लिगेसी कन्ट्याक्टले तपाईंका लागि एक मेमोरियल पोस्ट लख्न सक्छ । जसले पोस्ट हेर्न सक्छ र टाइमलाइनमा कसले श्रद्धाञ्जली दिन सक्छ भन्ने कुराको निर्धारण पनि गर्न सक्छ ।
तर यहाँनिर थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने आपाईंको अकाउण्टलाई त्यस्तो लिगेसी कन्ट्याक्टमा भएको व्यक्तिले आफ्नै प्रोफाइललाई जस्तो साथीहरु एड गर्न, हटाउन वा म्यासेज पढ्ने काम गर्न भने सक्दैन ।फेसबुक एपको दायाँतर्फ माथि कुनामा रहेको तीन वटा धर्सा भएको स्थानमा ट्याप गरी तल रहेको सेटिङ एण्ड प्राइभेसीमा जानुहोस् । त्यहाँ रहेको सेटिङ हुँदै योर फेसबुक इन्फरमेसनमा पुग्नुहोस् ।
त्यसमा रहेको अकाउण्ट एन्ड अनरशिप एण्ड कन्ट्रोलभित्र प्रवेश गर्नुहोस् । अब तपाईंले सुरुमै मेमोरलाइजेसन सेटिङ देख्नुहुनेछ ।
जसमा तपाईंले चुज लिगेसी कन्ट्याक्ट बटनमार्फत लिगेसी निधन भइसकेपछि आफ्नो फेसबुक नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति छान्न सक्नुहुनेछ । यदि निधनपछि तपाईं आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल मेमोरलाइज नभएर स्थायीरुपमा डिलिट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने डिलिट आफ्टर डेथ नामक तलको विकल्प रोज्न समेत सक्नुहुनेछ ।
ट्वीटरको फोटो प्रिभ्युमा कालो र गोरो अनुहारमा विभेद !
काठमाडौं । ट्वीटरको पिक्चर क्रपिङ अल्गोरिदमले कालोलाई छोडेर गोरो छालालाई प्राथमिकता दिएको पाइएपछि कम्पनीले अनुसन्धान थालेको छ ।
जब गोरो र कालो अनुहार भएका दुई फोटो ट्वीटर पोस्टमा राखिन्थ्यो तब मोबाइलमा त्यो पोस्टको गोरो अनुहार मात्र अधिकांश समय देखिने गरेको प्रयोगकर्ताहरुले पाएका थिए ।
ट्वीटरले उक्त एल्गोरिदम विकासको क्रममा आफूहरुले जातीय तथा लैगिंक असमानताको पक्षहरुलाई पनि परीक्षण गरेको बताएको छ । यद्यपि यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको ट्वीटरले स्वीकारेको छ ।
भ्यानकोभर स्थित एउटा विश्विविद्यालयका म्यानेजर कोलिन म्याडल्याण्डले जूम भिडियो कन्फ्रेन्समा एकजना सहकर्मीको टाउको हराए पछि ट्रबलसूट गर्दा यो पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त सफ्टवेयरले कालो व्यक्तिको टाउकोलाई ब्याकग्राउण्डकै भाग सम्झेर हटाइदिएको थियो ।
तर जब म्याडल्याण्डले यो कुरा ट्वीटरमा राखे, तब ट्वीटरले पनि मोबाइल एप प्रिभ्युमा उनको साथीलाई काटेर उनको तस्विरमा मात्र देखाएको पाए ।
उनले तस्वीरको संरचनालाई बदल्दा पनि ट्वीटरको एल्गोरिदमले त्यस्तै प्रिभ्यु देखाइरह्यो ।